Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: 2014
သင့်သွေးဖြင့်အသက်ကယ်ပါ မြန်မာ့အရုဏ်သစ်ဖြစ်ပါသည်။ ။
July လ 11 ရက်နေ့ဖြစ်သည်
post by Ko Soe Naing
Posted by Ko Gyii at 12:29 AM No comments :
မြန်မာ့အရုဏ်သစ် Crazy animated gif
ကြည့်မိလို့ မူးသွားရင် တာဝန်မယူ။
အလံ waving in the sky
Posted by Ko Gyii at 8:11 PM No comments :
လွယ်လင့်တကူ အမှန်မယူနှင့်။ ။
၂။ ``ဖွတ်``ရဲ့လော်ဘီ ``ဒေါင်း`` လော်ဘီနှင့်
၃။ အနောက်တလွှား ပူမီးပွားတုန်း
၄။ ဘာသာရေးအတွက် ရိုက်ချက်ပြင်းထန်
မိုက်မှောင် မှိုင်းတိုက် ထိုငမိုက်တို့
၆။ ဆယ်လီဗျစ်တီ နာမည်ကျော်ကြား
ထောက်ခံများ၍ Like ပေါင်းထောင်ချီ
၇။ သာသနာရေး ဘာသာရေးဟု
၈။ အငိုဘုရင် အပြောကျင်လည်
၉။ ပုဂ္ဂလအမုန်း မီဒီယာသုံး၍
မညှာတာ ထောက်ရှု့ အပြုမဆန်
၁၀။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် သုခမိန်ဟု
အမှား အမှန် ဝေဖန်ထောက်ရှု့
​by U Soe Naing​
Posted by Ko Gyii at 1:23 PM No comments :
Laptop များဝယ်သုံးတာ ၁နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်
မဖြစ်မနေ service လုပ်သင့်ပါပြီ။ဒါတောင် ရိုရိုသေ
၆ လကျော်တာနဲ့လုပ်ပါတော့။Laptop ရဲ့လေဝင်လေ
တဲ့စက်ဆိုသိသာပါတယ်။၃-၄ ရက်ဆိုLaptop အောက်
service မှာအပျော့ အပြင်းရှိပါတယ်။အပျော့ဆိုလို့မရီပါ
နဲ့။စုတ်တံ၊လေမှုတ်ရာဘာ tube နဲ့လုပ်တာကိုပြောတာ။
သူက စက်ဘော်ဒီကိုတစ်စဆီ ဖွင့်ထုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ပါ။
အဆိုးဆုံးက ကီးဘုတ်။နောက်ပြီး နပ်အတိုအရှည် နေရာ
လေဝင်လေထွက်မမှန်လို့ အပူလွန်ပြီး အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေ
သက်တမ်းတိုမယ်။အရင်ဆုံးထိတာ ဟတ်ဒစ်။ပြီးရင် ကီးဘုတ်။
တယ်။CMOS ဘထ္ထရီ။ခဏလေးနဲ့အားကုန်ပြီး BIOS ထိရော။
နောက်ပိုင်းစက်တွေမှာ လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေ ဒီဇိုင်း
ဒီနေ့ဝင်းဒိုးလာတင်တဲ့ 2006 Acer လက်တော့လေး။အသစ်
ထိုးကြည့်တာ cpu လေထွက်ပေါက်မှာပိတ်နေတာပဲ။တစ်စဆီဖွင့်
ရှင်းတော့ cpu ထွက်ပေါက်မှာ ကောဇော အမျှင်တွေ။ပိုင်ရှင်က
အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာသုံးတာ။ကြမ်းခင်းတဲ့ ကောဇော ကြောင့်။
လိုက်တယ်။ Acer Aspire 4315 မှတ်တမ်း။၂၉-၁-၂၀၁၄။၁၀:၄၀PM။
by U U Thann Naing
Posted by Ko Gyii at 12:48 PM No comments :
​အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက
"၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂ ၈မေတ္တာ" ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။
သမီးရည်းစား အချစ်ကို "၁၅၀၀ အချစ်" ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့
ပြောပြီး . . . မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ "၅၂၈ မေတ္တာ" ၊
အေးမြချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။
ဘာလို့ (၁၅၀၀) ရှိနေရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖြစ်လာရတာလဲ . . .။
ပူလောင်တဲ့ အချစ်မို့ ၁၅၀၀ ရှိတာက ထားပါတော့ . . . အေးမြတဲ့မေတ္တာကျမှ
ဘာလို့ ၅၂၈ ဆိုပြီး ကိုးလို့ကန့်လန့် လာဖြစ်နေရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုပြီး
ရှိနေရင် ပိုတောင် အေးမလားလို့လေ၊ နောက် အစွန်းထွက် ဂဏန်းလည်း မရှုပ်ဘူး)။
မထင်မှတ်ဘဲ ၁၅၀၀/၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာကို
ဆရာမ "ဂျူး" ရေးတဲ့ "မျှော်လင့်ချက် နှင့် အခြား
မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ" စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက်ရမှ အဖြေထွက်သွားတယ်။ အဲဒီ
၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လို ရလာသလဲ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အတိုင်း
ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ် (၁၀) ပါးကတော့ အောက်ပါအတိုင်း
အဲဒီ ကိလေသာ(၁၀)ပါးကို ရုပ် စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။
ပေါင်းလိုက်ရင် (၇၅) ရပါတယ်။ အဲဒီ ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅)ကို ကိလေသာ(၁၀)ပါး
နဲ့ မြှောက်တော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တ သဏ္ဍာန်၊ ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန် ရယ်လို့
နှစ်ပါးရှိတဲ့ အတွက် (၂)နဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ အတိုကောက်ကတော့
မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။
မေတ္တာပို့ရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်ကို ပို့ပါတယ်။
(၁) သဗ္ဗေသတ္တာ၊ (၂) သဗ္ဗေပါဏာ၊ (၃) သဗ္ဗေဘူတာ၊(၄) သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ၊ (၅) သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ
ပရိယပ္ပန္န၊ (၆) သဗ္ဗေက္ကိထိယော၊ (၇) သဗ္ဗေပုရိသာ၊ (၈) သဗ္ဗေအရိယာ၊ (၉)
သဗ္ဗေအနရိယာ၊ (၁၀) သဗ္ဗေဒေဝါ၊ (၁၁) သဗ္ဗေမနုဿာ၊ (၁၂) သဗ္ဗေဝိနိပါနိကာ
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ပါးကို မေတ္တာ(၄)ပါး ပို့ပါတယ်၊ "အဝေရာဟောန္တု၊
အဗျာဘစ္ဆာဟောန္တု၊ အနီဃာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု၊" တဲ့ . . .၊ ဒီတော့ (
၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ်)။ ဒါက အရပ်မျက်နှာ အမည်မတပ်ဘဲ (မရည်မှန်းဘဲ) ပို့တဲ့
"အနောဒိတ္တာ" မေတ္တာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး
အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အမည်တပ်ပြီး ထပ်ပို့ပါတယ်၊ အရပ် (၁၀)မျက်နှာ ရှိပါတယ် -
အဲဒီ အရပ်မျက်နှာတပ် ရည်မှန်းမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို
မြောက်လိုက်တော့ (၄၈၀) ရပါတယ်၊ အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀)ကိုမှ ပထမဆုံး
မရည်မှန်းဘဲ ပို့ထားတဲ့ မေတ္တာအပါး (၄၈)ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့် လိုက်တော့
(၅၂၈) ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အတိုကောက် ကတော့ ဒီလိုလေးပါ -
(၄၈ x အရပ် (၁၀) မျက်နှာ ) + ၄၈ [မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး] = ၅၂၈
၁၅၀၀ အချစ်နဲ့ ၅၂၈ ကိုတော့ သိပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေမှာများ (၅၂၈)
မေတ္တာကို ထားနိုင်မလဲ မသိ တော့ပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို
ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ (၅၂၈) လို့ မသေချာပါဘူး (မဟုတ်ဖို့ များပါ တယ်)။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမ်း မြင့်မြတ်လွန်း နေလို့ပါ၊ ဆရာမ
"ဂျူး" ကတော့ (၅၂၈) မေတ္တာရဲ့ သဘာဝကို မြတ်စွာဘုရားက တပည့်သာဝက ရဟန်းတွေ
အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာမှာပဲ တွေ့ရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။​
​ကြယ်လေး 8/11/10 @ https://groups.google.com/forum/#!msg/real-family-mm/dR9fmZ2qiDs/JRfrXwVqXIwJ
Dhamma Collections December 23, 2013 at 9:12am ·
by အနှိုင်းမဲ့စာတိုပေစများ @ https://www.facebook.com/DhammaCollections/posts/570140129727383
Posted by Ko Gyii at 1:34 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 1:27 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 12:12 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 10:11 AM No comments :
Posted by Ko Gyii at 10:05 AM No comments :